Kedu ka Nchedo Nzuzo Mail nke Apple (MPP) si emetụta ahịa email? | Martech Zone
Site na mwepụta iOS15 na nso nso a, Apple nyere ndị ọrụ email ya Nchedo Nzuzo Mail (MPP), na-amachi iji pikselụ nsuso tụọ akparamagwa dịka ọnụ ahịa mepere emepe, ojiji ngwaọrụ, na oge ibi. MPP na-ezochikwa adreesị IP ndị ọrụ, na-eme ka nleba anya ọnọdụ ọnọdụ karịa. Ọ bụ ezie na iwebata MPP nwere ike iyi ihe na-agbanwe agbanwe na ọbụna dị egwu nye ụfọdụ, ndị ọzọ na-eweta igbe ozi (MBPs), dị ka Gmail na Yahoo, na-eji usoro ndị yiri ya kemgbe ọtụtụ afọ.
Iji ghọta MPP nke ọma, ọ dị mkpa iweghachi azụ wee buru ụzọ ghọta ka ahụmịhe nha ọnụ ahịa mepere emepe ga-esi gbanwee.
Caching onyonyo pụtara na ebudatara onyonyo dị n'ime ozi-e (gụnyere pikselụ nsochi) site na sava izizi wee chekwaa ya na nkesa MBP. Na Gmail, caching na-ewere ọnọdụ mgbe emepere ozi-e, na-enye onye zitere ya ohere ịmata mgbe ihe a mere.
Ebe atụmatụ Apple si dị iche na ndị ọzọ bụ mgbe ole caching onyonyo na-ewere ọnọdụ.
Ndị debanyere aha niile na-eji onye ahịa mail Apple nwere MPP ga-ebu ụzọ nweta foto email ha ma chekwaa mgbe ezigara email ahụ (nke pụtara na ebudatara pikselụ nsochi ozugbo), na-eme ka email debanye aha dị ka meghere ọ bụrụgodị na onye nnata ahụ emegheghị ozi-e ahụ n'anụ ahụ. Yahoo na-arụ ọrụ yiri nke Apple. Na nkenke, pikselụ na-akọzi ọnụego mepere emepe 100% nke na-ezighi ezi.
Gịnị mere nke a ji dị mkpa? Nkwenye data gosiri na Apple na-achịkwa ojiji ndị ahịa email na ihe dịka 40%, yabụ na nke a ga-enwe mmetụta na nha ahịa ahịa email. Dịka ọmụmaatụ, omume azụmaahịa guzosiri ike dị ka onyinye dabere na ọnọdụ, akpaaka ndụ okirikiri na iji teknụzụ dị iche iche maka inye obere oge dị ka ngụ oge ga-esi ike karị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume iji rụọ ọrụ nke ọma n'ihi na ọnụ ahịa mepere emepe enweghị ntụkwasị obi.
MPP bụ mmepe na-adịghị mma maka ndị na-ere ahịa email nwere ọrụ bụ ndị na-arapara n'omume kachasị mma nke na-eme ka ahụmahụ ndị debanyere aha dịkwuo mma. Were echiche nke inwe ike tụọ njikọ aka site na iji ọnụma mepere emepe ka ịwepụ ndị debanyere aha na-adịghị arụ ọrụ ugboro ugboro, n'otu aka ahụ, wepụrụ ndị debanyere aha na-adịghị arụ ọrụ nke ọma. Omume ndị a, mgbe ejiri ya n'ụzọ ziri ezi, bụ ihe dị mkpa na-ebupụta nke ọma, mana ọ ga-esiwanye ike itinye ya.
Mwepụta nke GDPR afọ ole na ole gara aga gosipụtara ihe kpatara ụlọ ọrụ ahụ ji anabata ahịa ahịa.
GDPR were ọtụtụ ihe a tụlere na ọ bụ omume kacha mma - nkwenye siri ike karị, nghọta ka ukwuu, na nhọrọ/mmasị sara mbara - wee mee ka ha bụrụ ihe achọrọ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ere ahịa email lere ya anya dị ka isi ọwụwa irube isi, n'ikpeazụ butere data dị mma ka mma yana mmekọrịta ika / ndị ahịa siri ike. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị ndị ahịa niile na-agbaso GDPR ka ha kwesịrị ma ọ bụ chọta oghere dị ka ili nkwenye maka pixel-nsuso na ogologo amụma nzuzo. Nzaghachi ahụ nwere ike bụrụ isi ihe kpatara eji nabata MPP na omume ndị yiri ya ugbu a hụ ndị ahịa na-agbaso ụkpụrụ omume.
Mkpọsa MPP nke Apple bụ nzọụkwụ ọzọ maka nzuzo ndị ahịa, na olile anya m bụ na ọ nwere ike ịmaliteghachi ntụkwasị obi ndị ahịa ma mee ka mmekọrịta nke ika / ndị ahịa sikwuo ike. N'ụzọ dị mma, ọtụtụ ndị na-ere ahịa email malitere ime mgbanwe nke ọma tupu mmalite MPP, na-amata ezighi ezi nke metrik ọnụego mepere emepe, dị ka tupu ị nweta, caching akpaaka oyiyi ikike / nkwarụ, nyocha nzacha na ndebanye aha bot.
Yabụ kedu ka ndị na-ere ahịa ga-esi na-aga n'ihu na ìhè nke MPP, ma ha amalitelarị ime mgbanwe n'ụkpụrụ ahịa ahịa, ma ọ bụ na ihe ịma aka ndị a dị ọhụrụ?
Dabere na DMA akụkọ nyocha Onye ahịa email Tracker 2021, naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị na-ezigara na-adabere n'ezie na ọnụego mepere emepe iji tụọ arụmọrụ, na-eji clicks ejiri ugboro abụọ mee ihe. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịtụgharị uche ha gaa na nleba anya zuru oke na nke zuru oke maka arụmọrụ mkpọsa, gụnyere metrik dị ka ọnụego ntinye igbe mbata na akara aha ndị ezipụ. Data a, jikọtara ya na metrik dị omimi na oghere ntụgharị dị ka ịpị-site na ọnụego na ngbanwe, na-enye ndị na-ere ahịa ohere ịlele arụmọrụ nke ọma karịa imeghe, ma bụrụkwa ihe ziri ezi na nke bara uru. Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa nwere ike ịrụsi ọrụ ike iji ghọta ihe na-akpali ndị debanyere aha ha ka ha wee tinye aka na ha, MPP ga-agba ndị na-ere ahịa email ume ka ha nwee mmasị karị maka inweta ndị debanyere aha ọhụrụ ma nọgide na-elekwasị anya na metrics nke ga-eme ka azụmahịa ha gaa n'ihu.
Na mgbakwunye, ndị ahịa email kwesịrị ileba anya na nchekwa data ha ugbu a nke ndị debanyere aha ma nyochaa ya. Ndị kọntaktị ha ọ dị ọhụrụ, dị irè ma ha na-enye uru na ala ala? N'ịgbasi ike na inweta ọtụtụ ndị debanyere aha, ndị na-ere ahịa na-elegharakarị oge achọrọ iji hụ na kọntaktị ndị ha nwere na nchekwa data ha nwere ike ime ma baa uru. Data ọjọọ na-emebi aha onye na-ezipụ ozi, na-egbochi itinye aka na email, na-emefusị akụ bara uru. Kedu ebe ngwaọrụ dị Everest - ihe ịga nke ọma email n'elu ikpo okwu - batara. Everest nwere ikike nke na-eme ka ndepụta dị ọcha ka ndị na-ere ahịa wee nwee ike ilekwasị anya na oge na ego ha na-ekwurịta okwu na jikọọ na ndị debanyere aha bara uru bụ ndị nwere ikike ịtụgharị, kama imefusị ya na adreesị ozi-e na-ezighi ezi nke pụta na bounces na undeliverables.
Ozugbo enwetara ogo data na kọntaktị, ndị na-ere ahịa email kwesịrị ilekwasị anya na nnyefe dị mma na visibiliti n'ime igbe mbata ndị debanyere aha. Ụzọ na igbe mbata dị mgbagwoju anya karịa ọtụtụ ndị na-ere ahịa email na-eche, mana Everest na-ewepụkwa ihe nlere anya site na nnyefe email site n'inye nghọta na-arụ ọrụ na mkpọsa. Everest onye ọrụ,
Nnapụta anyị abawanyela, anyị nọkwa n'ọnọdụ ka mma iwepu ihe achọghị na-edekọ ọtụtụ oge na usoro a. Ntinye igbe mbata anyị siri ike ma na-aga n'ihu… iji nọgide na-aga nke ọma, anyị na-eme usoro niile na iji ngwaọrụ kachasị mma na ụlọ ọrụ na-eme ya.
Courtney Cope, onye isi ọrụ data na MeritB2B
Site na visibiliti n'ime metrik ahịa email na aha onye na-ezipụ, yana ịchọpụta mpaghara nsogbu na inye usoro iji dozie ha, ụdị ngwaọrụ ndị a bara uru nye ndị ahịa email.
N'iburu n'uche nke MPP na ọhụụ ọhụrụ na omume kacha mma ịre ahịa, ndị na-ere ahịa email ga-atụgharịrịrị metrik na atụmatụ ka ha wee nwee ihe ịga nke ọma. Site na usoro ugboro atọ - ịtụgharị uche metrics, nyochaa ogo nchekwa data na ịhụ na nnyefe na visibiliti - ndị na-ere ahịa email nwere ohere kachasị mma nke ịnọgide na-enwe mmekọrịta bara uru na ndị ahịa ha n'agbanyeghị mmelite ọhụrụ na-esi na ndị na-eweta igbe ozi.
Isi Iyi: Mmiri
Budata mkpesa Email Tracker DMA 2021
Tags: apụlakwụkwọ ozi apụlcourtney ịnagideogo nchekwa data emailozi nnapụta emailemail Marketingemail metrikozi nzuzoahia ziri ezimgbedeNchịkwaGmailiosios15adreesị IPnchedo nzuzo mailonye na-eweta igbe ozimbpmeritb2bemail mkpanakampppixel nsochiezindaba Everestyahoo
Sellics Benchmarker: Otu esi eme akara akaụntụ mgbasa ozi Amazon gị
Otu ndị otu ịre ahịa na azụmaahịa gị nwere ike kwụsị inye aka na ike ọgwụgwụ dijitalụ